Faha-30 taona nijoroan’ny Sampana Fifohazana – FJKM Ambavahadimitafo Faha-30 taona nijoroan’ny Sampana Fifohazana |
Faha-30 taona nijoroan’ny Sampana Fifohazana
A la une.Antso sy filazana.Fifohazana
Publié le 11 mars 2022 à 08:03
Miarahaba amintsika amin’ny anaran’i Tompo.
Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika mpianakavin’ny finoana fa afaka hidera sy hisaotra an’Andriamanitra noho ny faha – 30 taona izay nijoroan’ny Sampana Fifohazana eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo. Izany dia ho tanterahana ny alahady faha – 13 martsa 2022 manomboka amin’ny 9 ora maraina. Koa dia hery lehibe ho an’ny Sampana ny fanatrehantsika izany fety fankalazana izany.
Koa mba ho fanamarihana izany fankalazana izany dia asaina isika tsirairay avy mba hanao akanjo fotsy , indrindra ho an’izay afaka manatanteraka izany , mandritra ny fanompoam – pivavahana maraina.
Dia entanina ihany koa isika ny amin’ny antsan – kira izay ho tanterahan’ireo antoko mpihira maro samihafa ny tolakandro izay ho tanterahana ao amin’ny Akany ny alahady faha – 13 martsa 2022 manomboka amin’ny 14 h 00 ao amin’ny Akany Ralibera Daniel.
Dia mirary soa samy ho tahian’Andriamanitra.
Ny Biraon’ny Sampana Fifohazana.